Yintoni entolongweni yowesifazane okanye indoda ephuphayo? Ukulala entolongweni kunye nezihlobo kulo - aphi amaphupha.
Iphupha likajele lisiphi na? Hlala kuyo okanye ubone intolongo. Siqokelele ezininzi iinkcazelo eziphambili zala maphupha. Mhlawumbi omnye wabo uya kunceda uqonde oko ukulindele kwixesha elizayo okanye oko kukukhathazayo okwangoku.
Iphupha likaWannie: liphupha ntoni ijele
Ngokutsho kwengcaciso kaVanga, intolongo ibonakalisa ukuthula okungenangqondo okuzisa intlungu. Yintoni iphupha entolongweni? Kungekudala uza kugunyazwa imfihlakalo, ukugcinwa kwayo oku kuza kukubandezeleka.
Ukuba uphupha ukuhlala entolongweni, abathandekayo bakho abayikuxwayisa ngokungahambi kakuhle. Thetha kubo, unokusongela isongelo kwaye ungabandezeleka. Kwakhona, iphupha elinjalo lingafanisa ukuwa kwesicwangciso.
Kutheni uphupha intolongo ngenxa yowesifazane
Ukuba ubona abanye abantu njengeziboshwa, ukutolika kulula ngokwaneleyo - uya kubacela kubani obalulekileyo kubo bonke. Ukubona iifestile ezikhanyayo zetolongo kuthetha ukuba unokuphepha ingozi ngokuqonda.
Kutheni ukuphupha intolongo yamadoda
Ubaleke entolongweni : ukuba uyakuphepha ukukhutshelwa kwiphupha lakho, ngokukhawuleza uza kufumana ithuba lokuthatha inxaxheba kwishishini elinenzuzo.
Ukukhululwa entolongweni : le yiphupha elimnandi kakhulu - kukuba kwenziwe ukukhulelwa.
Yintoni intombazana entombeni ephupha ngayo?
Intombazana encinane eyabona intombi ephupheni eyayifakwe entolongweni ayithandi ukutolika. Oku kuthetha ukuba ungathembekanga kwaye kungekudala yonke inyaniso iya kubonakala.
Ziziphi iimbanjwa kunye namagosa aphuphayo?
Ukuzibona entolongweni : njengomkhuseli-olungileyo. Oku kuthetha ukuba usondele ukulinganisela emphefumlweni wakho. Musa ukwenza nantoni na ekhethekileyo.
Ukubanjwa kunye nentolongo : oku kubi kakhulu. Oku kuthetha ukuba iinzame zakho aziyi kuphelisa ngempumelelo. Ukuthintela oku, iMaya yamandulo ikucebisa ukuba uxhomeke uphawu olukhethekileyo lwelanga ngaphezu komnyango endlwini yakho.
Ngaloo ndlela, ubona ukuba akusoloko ufanelekile ukukhathazeka ngenxa yokuba ijele liphupha. Ngamanye amaxesha kuthetha ukuba utshintsho oluhle ebomini.
Ukutolika kwamaphupha malunga nentlanzi efile
Iingcamango zamaphupha: ntoni abaphuphayo abaza kuxela ngalo?
Isaladi kwiifatata kunye neebhere
Yonke into malunga nesepha: sandisa "isepha" yethu
I-Badyaga ivela kumacembe kunye neengcavu
Ulala ngesini, ulukhetha ukuthini?